Baladweyne : Kursiga tirsigiisu yahay 086 oo isha lagu wada hayo – Bulsho News
Baladweyne : Kursiga tirsigiisu yahay 086 oo isha lagu wada...
Baladweyne : Kursiga tirsigiisu yahay 086 oo isha lagu wada hayo
Xigashada Sawirka, Facebook
Fahad Yaasiin, la-taliyaha amniga ee Madaxweyne Farmaajo
Guddiga doorashada ee maamulka goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 6 kursi oo ka mid kuraasta Golaha Shacabka ee Beledweyne kaas uu ka mid yahay kursiga la rumeysan yahay in uu ku tartamayo taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin, haddane ah La Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo.
Waxay guddiga sheegeen in doorashada kuraastaas ay dhaceyso Axadda nagu soo aadan.
Inkastoo uusan si shaac baxsan u sheegin, haddana Fahad ayaa la rumaysan yahay inuu u tartamayo kursiga HOP 86 ee deegaan doorashadiisu tahay Beledweyne, iyada oo ay magaalada joogaan odayaal iyo ergo beeshiisa ah oo si aan qarsoonayn ugu ololeynaya Fahad sida ay BBC-da ka ogaatay illo madax bannaan.
Si weyn ayaa loo hadal hayaa kursigan uu ku tartamayo Fahad Yaasiin, Daahir Qoriyoow Isaaq oo falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa BBC u sheegay in kursigan in labada qof ee ku tartameyso kursigan ay saameyn xooggan ku leeyihiin siyaasadda.
“Kursiga hadal heyntiisana waxaa sii xoojiyay, Fahad Yaasiin waxaa loo heystay arrin ay kamid tahay kiiska Ikraan Tahliil, kursiga hadduu Fahad helo waxay siinaysaa xasaanad-waa kursi muujinaya jiritaanka nolosha siyaasadeed ee Fahad Yaasiin iyo saameynta siyaasadeed ee Faarax Cabduqaadir” ayuu yiri Daahir Qoriyoow.
“Hadal heynta waxaa keenay waa shakhsiyaadka meesha u tartamayo waa labo shakhsi oo awood ku leh siyaasadda Soomaaliya midna dowladdii hore iyo midna dowladda imika jirta” ayuu Daahir Qoriyoow oo BBC-da arrintani wax ka weydisay, kana hadlayay saamayntii Faarax Cabduqaadir oo udub dhexaad u ahaa dowladdii madaxweyne Xasaan Sheekh, halka Fahad uu sidoo kale saamaynt taasi la mid ah ku leeyahay dowladda hadda jirta ee madaxweyne Farmaajo.
Fahad ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo maamulka ka jira Beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabelle, Cali Guudlaawe Xuseen.
Daahir wuxuu sidoo kale sheegay “Madaxweyne Guudlaawe wuxuu isku dayay in uu dejiyo xiisadda si Fahad uu u helo fursad uu ku tartamo , waana dimuqraadiyad in kursi lagu tartamo, Guudlaawe oo loo maleynayo in uu ka ag dhaw yahay madaxweynaha si loo qabto doorashada kuraasta taalla Beledweyne”
Haddaba muxuu yahay miisaanka uu leeyahay kursigan?
Xildhibaan Faarax Cabdiqaadir ayaa horey ugu fadhiyay kursiga tirsigiisu yahay 086
“Kurisgan uu ku tartamayo Fahad Yaasin miisaan weyn buu leeyahay waxay isku hayaan nin la yiraahdo Faarax Cabduqaadir oo aad ugu dhawaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh halka Faarax Cabduqaadir uu saameyn xooggan ku lahaa dowladdii Xassan Sheekh , Fahad Yaasin wuxuu saameyn weyn ku leeyahay dowladda haatan jirta yahayna la taliyaha khaaska ah ee madaxweynaha- waxaan dhihi karaa waa labo milkiile dowlad hore iyo mid haatan jirtaa oo isku heysta kursigan, wuxuu kursigan muhiimad weyn u leeyahay dhinac ay u jaanjeerto siyaasadda” ayuu yiri Daahir Qoriyoow Isaaq.
Xigashada Sawirka, AL JAZEERA
Warar ay BBC Soomaali heshay ayaa sheegaya in ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku cadaadinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer Federaal inuu joojiyo qabashada doorashada kursiga HOP 86, kaasoo uu doonayo Fahad Yaasiin oo la-taliyaha amniga qaranka ee Madaxweynaha Soomaaliya.
Xubno ka tirsan guddiga oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa BBC Soomaali u sheegay in ra’iisal wasaaraha uusan sheegin sababta uu u rabo in dib loo dhigo doorashada kursigaas oo uu hadda ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabduqaadir oo mar ahaa wasiirka cadaallada ee Soomaaliya.
Lama ogga go’aanka uu guddiga ka qaatay dalabka ra’iisal wasaaraha iyo in la joojin doono qabashada doorashada HOP 86.
Xildhibaan Faarax ayaa hadda hawlo caafimaad ugu maqan dalka dibeddiisa.
Xiriirka ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Fahad Yaasiin ayaa xumaa tan iyo markii bishii September 2021 uu ka qaaday xilka taliyaha hay’adda awoodda badan ee NISA.
Arrinta doorashada kursigan iyo musharaxnimada Fahad ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii dhowaan garoonka Aadan Cadde laga celiyay Cabdiweli Muudeey oo ahaa guddoomiye ku xigeenkii baarlamaanka 10-aad oo u tartamayay kursi kale oo yaala Baraawe. Waxaa aad la isula dhexmarayaa , qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ahna ay tabisay in Fahad uu danaynayo in uu u tartamo kursiga guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka 11-naad, taasi ay tahay sababta rasmiga ah ee loo malaynayo in Maadeey looga hor istaagay doorashada Baraawe.
Cabdiweli Muudeey ayaa labo jeer oo isku xigna noqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka, xilkaas oo ah qoondo ay markasta helaan beelaha dhibic shanta ee nidaamka wax qeybsiga siyaasadda Soomaaliya ee 4.5ta.
Xildhibaan Faarax Cabdiqaadir ayaa doorashadii 2017-kii u tartamay kursigan guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka oo marka masraxa siyaasadda la joogo loo arko kursi aad muhiim u ah, gaar ahaan xilliyada xasaadiga ah. Hase yeeshee waxaa kursiga heley Cabdiweli Muudeey.